Lazao ny hevitrao | GAZETY_ADALADALA
Mba tiako ho fantatra ny hevitry ny tsirairay izay afaka mahita ity hafatro ity. Na mpomba ny HAT ianao, na mpomba ny TIM, na tsy atsy sy tsy aroa.
Misy ny gidragidra ankehitriny, ka raha mitolona ho an’izay hevitra ijoroanao ianao (amin’iretsy roa voalaza mialoha -HAT – TIM), dia mitolona ho an’iza, sa ho an’ny inona? Mitolona ho anao ve? sa mitolona hanabe hatoka ny hafa? sa hafa noho ireo koa…?
Tari-dàlana tonga ato an-tsaiko fotsiny ireo fa na ianao aza mety mbola hahita fanontaniana , na antony hafa tokony horesahana, avoahy eto fa tsy olana mihitsy. Misokatra malalaka ho an’ny rehetra araka izany ny fanehoana hevitra.
Dia miandry ny gasy e! Ary misaotra mialoha.
Filed under: anao ny fitenenana | Tagged: fanehoana hevitra, HATA, TIM |
« Vaovao misoko amin’ny aterineto Tract mipetaka eny amin’ny abri-bus eto Tanà »
niaina, on 26/04/2009 at 10:20 said:
Tena niezaka ny tsy hiteny hatramin’izay, zao anefa tena tafalatsaka isika mianakavy ka te handray anjara sao izay no pitiny kely zaka handaminana azy ity.
Voalohany dia tsy handainga fa momba ny fitondrana talohan’izao ny tena ,nefa tsy miaro amin’izay ratsy mety vitany raha tena voaporofo izy ireny.
Ny zava-mitranga ankehitriny dia mampalahelo nefa anatin’izany dia misy zavatra tena mahafaly tao anatin’izay 4 volana eo ho eo izay. Misy firaisankina tsy azo lavina tao (ny mahagasy io), ary misy koa toetra tsy azo tsindrina tao (ilaina ihany amin’ny fotoana mahamety azy).
Ny hevitra dia ny hoe ny fitondrana marina raha alaina amin-kery dia tsy hita izay tokony hiresahana democratie ary koa tsy haharitra na rahoviana na rahoviana. Satria dia tena basy, fandrahonana, takalon’aina ary fandrobana hatrany no nentina namitàna ny dingana rehetra rehetra vitan’ireo olona ireo (tetezamita). Porofon’izany koa ny mbola fanemorana ny fifidianana lavitra araka izay azo atao. Nefa io no vahaolana farany, tsy azo iadian-kevitra io.
Tsy fotoana hifanomezan-tsiny betsaka intsony anefa izao satria na iza na iza gasy maty teo na voaroba dia havantsika daholo ireny.
Ary koa tsy ny mpitondra mivantana daholo no namono olona fa dia ny tànana mitazona basy mivantana (Miaramila), ary rehefa ireo no tsy manara-dalàna na mandray baiko tsy tokony hotanterahina dia izay no atao hoe savorovoro satria na iza na iza dia mety hifanitsy amin’ireny vavabasy ireny daholo.
Amiko dia nampiseho hatrany ny miaramila sy ny polisy ary zandary fa tsy te hanara-dalàna intsony. Nisesy ny zava-nitranga rehetra (Na vice Amiral, na general dia tsy misy ny fanajàna azy ireny). Izay no tsy nahatanteraka ny directoire militaire (soa ihany).
Soso-kevitra àry, tsy fotoana intsony izao hijerena tavan’olona na antokon’olona, na koa hifanomezan-tsiny fahatany fa dia tsotra ny asosoko. Rehefa tsy nahafehy filaminana hatramin’ny andro voalohany nampisalorana samboady azy ny mpitondra ankehitriny dia tokony hieritreritra tsara.
Ho antsika vahoaka dia tsy maintsy mitohy ampilaminana ny tolona ary manantena fifidianana tsy ho ela no tanjona amin’izany, FIFIDIANANA hoy aho.
Izany hoe tsy hamerina an-jambany olona fa tena mandinika lalina. Ary mba mazotoa mifidy fa tsy mifanome tsiny aty aoriana toy izao.
Mila mifidy ny rehetra hoy aho satria tsy izay hilatsaka ben’ny tanàna eto Antananarivo dia ho lasa filoham-pirenena daholo.
Ho an’ny miaramila, tena mino ve ianareo fa tena mbola tsy nisy havan’ny namanareo akaiky na havanareo akaiky ireo voatifitra maty sy naratra ireo. Mitandrema ihany lahy fa na ny sarinareo aza anie dia efa miparitaka etsy sy eroa e! Aza tarihina amin’ny làlana tsy tokony alehany ny tolom-bahoaka.
Na ny lisitry ny miaramila ao amin’ny Capsat sy ny adiresy aza dia efa miparitaka fa mbola hendry ny vahoaka malagasy ka tsy ho voajono amin’ireny.
Misaotra antsika namaky.
BKY, on 30/04/2009 at 1:56 said:
Nisy TIM nisy nanaraka
Nisy HAT OU TGV nisy nanaraka
Lazaina fa tsy mety ny nataon’ity voalohany ary hanangana ity faharoa.
Tsy mety hoy aho milaza aminao hoy ihany ity faharoa
Ilay voalohany kosa lasa ary nametraka filazana aty aoriana nefa dia na ny I na ny faha2 dia samy milaza fa menace no nifanaovana
etsy andaniny tsy mety hoy ialay faha2 ny nataon’ilay voalh nefa dia notohizana ary miafara amin’ny ratsy mihintsy aza vono olona
Olombelona re isika gasy avokoa na fotsy na mainty na tsy mitovy firiankevitra aza
mandiniha mifanaja ary mivavaha amin’ny fo fa aza miatsara velatsia
titi, on 27/04/2009 at 10:30 said:
Tsy ho hanao lava resaka aho fa dia araka ny filazanao etsy ambony dia mba hamaly ny fanontanianao fotsiny.
Izaho dia tsy an’ny atsy tsy an’aroa. (Ni TGV ni Ra8).
Samy tsy mahavita azy ireo.
Olona vaovao no ilaina ho an’i Madagasikara. Olona vonona hitondra ny nosintsika ambony kokoa. Olona afaka hamerina ny atao hoe fihavanana, olona intègre (miala tsiny fa tsy haiko ny dikan-teny) … Fa raha ohatra ka mbola olona sahala @ TGV na R8 no hitondra dia tsy ho lasa lavitra ny Nosintsika !
miora, on 28/04/2009 at 4:25 said:
Hamaly anao aminy fo madio aho. Ny ahy dia départ ny R8ny zava dehibe amiko. Ary ankehitriny dia tokony hatao haingana ny fikarakarana ny fifidianana hampandrosona ny firenena. Izay mpitondra manaraka eo dia tokony lesona be aminy ireny zava-niseho ireny, satria tsy nisy mafy loha ohatra ny r8 fa dia lasa izy iny no niafarany. Ary ny momba ireo tafika , dia fisaorana no atolotro azy satria mahatsapa aho fa mafy ny asanareo rehefa ao anaty ny crise toy izao , sady tsy te homba ny atsy na ny aroa fa rehefa farany tsy maintsy manao choix ihany. Ny vahaoloana ozy aho dia ny discussion ihany fa tsy misy zavatra tsy vita raha mahay miresaka isika gasy fa tsy ho entina amin’ny herisetra izany sy ny provocation isan-karazany. tokony mahay mifamela isika fa ny gasy hono olon’ny fo ka inona moa no tokony hiadiana sy hanampoteana ny tanandrazana.
Resak'eh daholo ireo e!, on 28/04/2009 at 4:42 said:
Ny amiko aloha,dia aleoko raha tsy maintsy mifidy dia i Ravalomanana e!f’ity Andry ity dia sady fitadiavan-toerana sy rehereha ary famenom-paosy no tadiavin’io,nefa tsy capable mihitsy raha araka ny fahaizany e!
Mirana, on 01/05/2009 at 12:33 said:
Ao anati’izao savorovoro miseho lany eto Gasikara izao,dia mampalahelo tokoa ny zavatra miseho.Ny tiako hapetraka mialohan’ny hilazako ny fomba fijeriko,dia ireto no apetrako:
_ tsy natao hifamono ny MALAGASY
_ tany masina i MADAGASIKARA
_ aza atao jinona ny nahatonga azy ho MASINA
_ sasa-poana ianareo te hanota fady …
Tsy tahotra ny hanao ny tsara no ilazako hevitra eto,fa tahotra ny hanao ny ratsy.
Ireto misy fampanantenaina nataon’olona iray teto an-tanàna:
_ fahamarinana sy fahamasinana
_ hampanana ny tsy manana,ary tsy haka ny an’ny efa manana
_ mahazo 4L iray isan-tokantrano
_ fampandrosoana haingana sy maharitra…
…Dia mbola hoy izy hoe: « rehefa manao dia ataovy hatr@ farany »…Asaivo tsapainy aloha ny heriny !…
Iza hoy ianao io miteny io?…Olona akaikin’i satana io!…Nitady toerana mafy izy io mba ho filoha lefitra iray ao anatin’ny fiangonana lehibe iray eto Gasikara.Tanan-kavanan’i satana tokoa io olona io, satria dia nanome vahana an’i Mamona izy ahavoan’ny fandraikiraikena ny Gasy mahantra.Ary ny tena mahavaka ny saina, dia ny fahitana ny Filohan’izany fiangonana izany voan’io fandrika tsy roa aman_tany io…Henjana be ange izany rey olona o !
…Ka izao ary no izy : ampahafantariko anao, fa tsy ady @ nofo aman-drà izao zava-miseho izao, fa ady @ ilay fanahy ratsy eny @ rivotra.
Koa samia mahereza, miambena mafy ary mahareta @ fivavahana !
ramalina, on 03/05/2009 at 4:28 said:
ho andry akia ry Mirana a!
fantatro fa indry no anisan’ilay tsy nahazo fahafahampo mihintsy tamin’ny fotoana nitondran-dRa8 hatramin’izay. Tsy tsapandry mihintsy ny asa nataony sy ny fiovana ivelany teto Madagasikara, ary hita fa tsy nampiova ny farimpianan-dry hatramin’izao izany. Fantatr’indry ve anefa fa na iza na iza no ho mpitondra na nitondra teto dia tsy misy nataony afa-tsy ny nameno ny paosiny sy nandefa ny fananany any amin’ny banque Suissie fotsiny aloha.
Izaho mampatsiahy andry, fa amiko, na nangalatra aza i Ra8 tsy maninona fa ny azy ny vola mety ho azony tamin’ny halatra, nentiny nananganana orinasa nahazoana nampiasa gasy 3500 sy mpamboly sy mpiompy 100.000. ny an’ny sasany anie ny investissement à outrance tsy hita izay nandehanan’ny volam-panjakana e!
Tiako aloha indry, tsy fantatro ny taonan-dry, mba hiverina hanao analyse lalindalina kokoa amin’ny tantaram-pirenen’i Madagasikara, nanomboka ny 1896, 1947, 1959, 1960, 1975, 1985, 1991, 1993, 2000, 2002, 2006 ary ny 2009. Inona avy no nitranga teto. Iza no olona heverin-dry fa afaka indray hitondra an’i Madagasikara raha toy izao daholo ny teknisiana sy ny manam-pahaizana gasy.
Vitan-dry ve ny mitondra io firenena io?.
Andeha hoe aloha hiaingana amin’ny fitondrantena, ny tokantrano, ny Fokontany, Firaisana. Zaka ve aloha hatreo. Tsy mora anie io e!
ankehitriny anefa dia ampamoaka. Tsy maninona izany fa tsara ny hahafantarana ny marina raha tena marina fa tsy fanalana baraka fotsiny. Ny olona koa anie manana ny zava-miafina nataon’i Andry, ny chèque sans provision nataony PM HAT, ny soloky nataon’ireo milaza azy ho minisitra ireo e. Amiko ireny fifanasana ireny tsy mendrika toe-tsaina gasy, ary tsy tantin’ny rehetra raha izy no iharan’ireny, koa moramora hoe. Hoavy anie io raha hitarina e. Ny gasy marina reitsy olon’ny fo ary voataizan’ny Raiamandreny sy ny Ntaolo t@ fahemendrehana ka izay no tsy mbola hipoahan’ny ady an-trano mahatsiravina eto amintsika hatramin’izao a! Raha ireny fihantsiana teny @ 13 mai izay mbola mitohy hatramin’izao ireny anie no valian’ny bandy ho sarotra ny toe-draharaha e.
Aleo reitsy milamina dia hisesy a. Asaivo hajanon-dry zareo ny gidra fa tsy mitondra antsika ho aiza izany, raha afaka miteny any indry na eken-teny na maha-teny ireo olona ireo.
Raha tsy izany, dia mipetraha tsara, ‘ndana manasa lamba aloha.
Tokinao, on 28/04/2009 at 11:36 said:
Izaho manokana … raha mitolona manohitra ny HAT dia satria :
-voalohany : Amiko dia habibiana izany atao hoe « coup d’Etat » izany. Fampiasan-kery fotsiny fa tsy mba nisy fanontaniana ny hevitry ny vahoaka. Ilay fomba fiteny hoe : « ny vahoaka no nametraka azy » indray dia fampiesonana mazava : fanatsinontsinoavina ny fifidianana, izany hoe fanatsinontsinoavana ny demokrasia sy ny safidim-bahoaka.
-faharoa : hitako ho betsaka ny soa nataon-dRavalomanana, na dia eo koa aza ny tsy vitany. tsy hitanisa aho afa-tsy ny fanaovan-dàlana, ny tsy fiankinan-doha amin’ny frantsay aho, sns.
Dinika amorom-patana, on 29/04/2009 at 5:59 said:
Tena tsara fipetraka ilay fanontaniaina satria ny fiainana dia azo jerena ho tolona hatrany: kanefa dia tolona ho an’iza marina? Na tolona ho an’inona marina?
Mazava ho azy fa raha hitolona ihany ve tsy hitolona ho an’ny tenako manokana aloha? Hitolona ho any tombotsoako manonkana? Izay angamba ny valin-teny mety tonga voalohany ao an-tsain’ny ankamaroan’ny olona amin’izao fotoana izao. Hitolona ho an’ny tsaratsara sy ny mendrimendrika kokoa hatrany ve?
Tsy ho tonga lavitra ary mety ho herim-po very maina ihany anefa raha ny tenako manokana fotsiny foana no ho tsinjoviko hatrany, satria ny azo tokana hono tsy mba ala.
Raha mitolona ny fiarahamonina manondidina ahy, dia amin’ny maha mpikambana ahy ao anatin’izany fiarahamonina izany, dia tsy maintsy hisy fiantraikany (na bitika dia bitika aza) aty amiko ny vokatr’izany tolona izany (na soa na ratsy izany vokany izany).
Raha hitolona ho ahy irery aho, dia amin’ny maha mpikambana ahy ao anatin’ny fiarahamonina iray, dia tsy maintsy hisy fiantraikany (na bitika dia bitika aza) eo amin’ny fiarahamonina sy ny manondidina misy ahy ny vokatr’izany tolona ataoko izany (izay mety ho soa fa tsy voatery satria mety ho ratsy koa).
Ka mba tsy haha-very maina fotsiny ilay herim-po rehefa hitolona ihany, dia mazava fa tsy hisy lanjany maharitra na mahasoa ny tolona raha tsy mijery sy mitsinjo koa izay manondidina ahy aho, izany hoe ilay fiaraha-monina misy ahy.
Izany hoe ny vokatra mety haterakin’ny tolona na ho an’iza io tolona io, na ho an’inona, dia tsy maintsy hisy ampahany (na bitika dia bitika aza) hiantefa eo amin’ny manondidina amin’ny ankapobeny, amin’ny maha mpiara-monina.
Maro karazany ny atao hoe tolona, satria ny olona tsirairay dia samy manana ny tolony tandrify azy avy: ny mitady hanin-kohanina anio dia efa tolona be ho an’ny olona maro, ny fitadiavana asa dia efa tolona koa, ny fitsaboana tena dia efa tolona, ny fanabehazana/ny fitazaina ny tanora sy/na ny manondidina dia efa tolona koa, ny fikatsahana izay mety mahasoa dia azo raisina ho tolona avokoa indrindra amin’izao fotoan’andro izao, sns.
Ka dia mirary faherezana ho an’ny mpitolona isan-karazany aho, satria tsy moramora izany atao hoe mitolona izany, fa indrindra indrindra mirary fahendrena ho an’ny mpitolona isan-karazany, satria (arak’izay efa voalazako etsy ambony) arakaraky ny tolona atao ary koa ny fomba fitondrana izany tolona izany, dia tsy voatery ho soa foana hatrany ny vokatra azo avy @ zany tolona izany.
Potsy, on 30/04/2009 at 4:47 said:
Ary satria misokatra ny dinidinika dia toy izao no hevitro ary: Raha manaraka izao tolona izao ny tenako dia tsy noho ny fitiavana olona iray akory fa noho ny fahitana kosa ny zava misy ankehitriny izay tena tsy rariny intsony. Mahatsapa mantsy aho fa voahitsakitsaka ny zo ko dia ilay vato nalatsako t@ 2006. Zà dia olona democrate izany hoe manaiky resy raha tena resy @ fifidianana (toy izay nitranga t@ fifidianana maire) fa tsy ekeko kosa ny fanonganam-panjakana à alalan’ny hery. tsy vitan’izany fa mbola horohoro(terrorrisme) no entin’ireto mpandromba fahefana ireto hitazomana ny toerana. Noho izany dia mila miady ny tenako ary izany no hitolomako
miora, on 19/06/2009 at 1:27 said:
izaho manonkana dia manohana ny HAT , satria ny fialany r8 dia zava dehibe tamiko, nitolona isan’andro teny amin’ny 13 mai aho noho izany. fa kosa nyHAT dia tokony tsy haharitra eo fa manao izay hanaovana fifidianana haingana ,hampiverina ny filaminana eto Mada sy mba tsy hisian’ny fanararaotana ataony sasany. Ny toenstsika gasy koa mila miova satria izay tonga eo dia mitady hameno paosy fontsiny fa tsy mieritreritra ny sarambabem-bahoaka..